Bangladesh: Misaona ny loholona namana, Edward Kennedy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2009 13:59 GMT
Senator Edward Moore “Ted” Kennedy (22 febroary 1932 – 25 aogositra 2009), mpikambana faharoa zokiny indrindra ao amin'ny loholona amerikana, dia matin'ny homamiadana ny talata lasa teo. Mitomany ity olo-malazan'ny politika ity daholo i Etazonia sy izao tontolo izao noho ny asany manohana ireo olona manana olana, ireo mpitsoam-ponenana Bengalais nandritra ny adin'ny fanafahana, ireo olona mosarena any Etiopia, ary nandray anjara betsaka tamin'ny fandriam-pahalemana tany Irlande Avaratra. Ny praiministra any Bangladesh, Sheik Hasina, no manao an'i Ted Kennedy ho “namana mahatoky an'i Bangladesh” ary mampahatsiahy ny andraikitra notanany nampahafantatra an'i Bangladesh teo an'ivon'izao tontolo izao nandritra ny adin'ny fanafahana. nanoratra i Habib Siddiqui, mpitoraka bilaogy avy any Bangladesh monina any Etazonia:
Amin'alahelo lehibe no hiondrehako manoloana ity olona malaza ity izay tsy hadino mandrakizay ny zavatra nataony ho an'i Bangladesh.
Inona no nataon'ny loholona Kennedy ho an'i Bangladesh? Manazava ilay mpitoraka bilaogy.
Nanokatra ady hevitra ho an'ny bilaogy ao amin'ny Open Salon i Smith Barney:
Taorian'ny nanafihan'i Pakistan andrefana (atao hoe koa Bengale, Bengladesh ankehitriny) an'i Pakistan antsinanana tamin'ny taona 1971 dia mpitsoam-ponenana 9 tapitrisa no namakivaky ny sisintanin'i Inde. Tsy nanaitra an'izao tontolo izao sy Etazonia (Nixon/Kissinger, mbola variana tamin'i Vietnam, ary nirona bebe kokoa tamin'i Pakistan andrefana). Niavaka tamin'izany anefa ny loholon'i Massachussets, 39 taona, Edward Kennedy.
Tao anatin'ny hafanana be sy ny rivotry ny volana aogositra no tonga tany amin'ny tobin'ny mpitsoam-ponenana nanerana an'i Bangale andrefana (manakaiky ny sisintanin'i Inde) ny loholona Kennedy ary nanao tatitra tamin'ny loholon'i Etazonia manontolo, fanadihadihana mahatalanjona momba ny fijalian'ireo mpitsoam-ponenana any Inde sy ilay nantsoiny hoe “ny fanjakan'ny ramatahora mianjady amin'i Bangladesh antsinanana”.
Nofintininy hoe: “Ny fanohanana mafy ataon'i Amerika amin'i Islamabad (Pakistan andrefana) dia tsy misy dikany raha ampitahaina amin'ny zava-doza iainan'ny olona sy ny politika any Bengale antsinanana.”
Tsy vitan'ny hoe vavolombelona fotsiny i Kennedy fa nanaitra an'izao tontolo izao izy hahatsiaro tena hanampy ireo mpitsoam-ponenana ireo, tsy voatery hoe ireo mpiady mahaleo tena an'i Bengale antsinanana akory.
Unheard Voices, bilaogy any Bangladesh miompana amin'ny zon'olombelona no namoaka ny tatitra nataon'ny loholona Kennedy tamin'ireo loholona amerikana, izay namelabelatra ny fangirifiriana nahazo ireo mpitsoam-ponenana.
Mehrab Shahriar posts no namoaka ny santionany amin'ireo sarin'ny mpitsoam-ponenana sy ny fitsidihana nataon'ny loholona Kennedy tany amin'ny tobin'ny mpitsoam-ponenana tamin'ny taona 1971.
H. A. Mahmud no nilaza[bn]:
Tonga tany an-toerana i Edward Kennedy tamin'ny fiandohan'ny taona 1972 taorian'ny fanafahana an'i Bangladesh. Nandray anjara tamin'ny matso izy ary nikabary nanoloana ireo mpianatra ao amin'ny anjerimanontolon'i Dhaka. Mbola ao amin'ny anjerimanontolo ny hazo banyan nambolen'i Kennedy hatramin'izao hahatsiarovana ireo soa vitany.
Shada Kalo no mahatsiaro an'i Kennedy noho ny soa nataony:
Ted, naman'i Bangladesh ianao. Tsy nitondra vato ho anao izany, tsy nisy olona nanome tsiny anao raha nandeha tany anaty fotaka tany amin'ny tobin'ny mpitsoam-ponenana tanatin'ny hafanana mangotraky ny volana aogositra ianao. Kanefa nataonao izany, satria tokony ho natao. Nanampy anay ianao satria zavatra mety sy tokony ho natao koa izany.